ho Rafitra fonosana mandeha ho azy tsara indrindra miaraka amin'ny Conveyor Conveyor Manufacturer and Factory |Xingyong
Mety amin'ny lanjan'ny granular, flake, horonana na tsy ara-dalàna miendrika vokatra toy ny vatomamy, voa, jelly, french fries, voan-kafe, voanjo, mifoka sakafo, biscuits, sokola, harato, sakafo ho an'ny biby fiompy, fitaovana, sns.
metyho an'ny milanja granular, flake, horonana na tsy ara-dalàna miendrika vokatra toy ny vatomamy, voa, jelly, french fries, voan-kafe, voanjo, mifoka sakafo, biscuits, sokola, harato, sakafo ho an'ny biby fiompy, fitaovana,
Fenoy ho azy ny dingana rehetra manomboka amin'ny famahanana, ny lanja ary ny famoahana ny vokatra vita.
Wide fampiharana isan-karazany, mety amin'ny isan-karazany ny fitaovana, avo lanja marina sy ny fahombiazana.
Tehirizo ny habaka sy ny sandan'ny fampiasam-bola.
.Chain-plate mitongilana conveyor: ampiasaina amin'ny fampitana vokatra lehibe;conveyor mitongilana karazana fehikibo: ampiasaina amin'ny fampitana poti, vovoka, sns.
teo aloha: milina fanodinana rojo vy
Manaraka: Masinina fonosana mitsangana ho an'ny lafarinina sy vovoka
milina famonosana mandeha ho azy
milanja loha maro
milina famonosana mitsangana
© Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, Belt Conveyor, Belt Conveyor elektrika, Fonosana Belt Conveyor, Tubular Belt Conveyor, Skirt Belt Conveyor, Stainless Steel Screw Conveyor, Ny vokatra rehetra